Korintofo II 2 NA-TWI - Enti meyɛɛ m’adwene sɛ meremma mo - Bible Gateway
Korintofo II 1Korintofo II 3
Korintofo II 2 Nkwa Asem (NA-TWI)
2 Enti meyɛɛ m’adwene sɛ meremma mo nkyɛn bio mmɛhyɛ mo awerɛhow. 2 Sɛ mebɛhyɛ mo awerɛhow a, hena na ɔbɛkyekye me werɛ? Mo ara a mahyɛ mo awerɛhow no anaa? 3 Saa nti na mekyerɛw saa krataa no brɛɛ mo. Na mempɛ sɛ meba mo nnipa koro no ara a mubegye m’ani no nkyɛn bɛhyɛ mo awerɛhow. Minim yiye sɛ, sɛ me ho tɔ me a, mo nso mo ho bɛtɔ mo.